Ciyaartoy reer Ghana ah oo loo ganaaxay jawaabtii uu ka bixiyay fal "cunsurinimo" ah - BBC News Somali
Ciyaartoy reer Ghana ah oo loo ganaaxay jawaabtii uu ka bixiyay fal "cunsurinimo" ah
Lahaanshaha sawirka Rex Features
Image caption Bernard Tekpetey
Bernard Tekpetey oo ah ciyaartoy reer Ghana ah ayaa labo ciyaarood la ganaaxay ka dib markii ciyaarta looga saaray jawaabtii uu ka bixiyay eedayn lagu sheegay cay cunsurinimo ah oo lagu kacay intii ay socotay ciyaar ka tirsan Austrian Cup.
Ciyaartoygan 20 jirka ah ee weerarka uga dheela Altach ayaa markii uu gooasha afraad u dhaliyay kooxdiisa isaga oo la sheegay in sameeyay arrin aan haboonayn isaga oo waliba qaabilay dhanka taageerayaasha kooxda Union Gurten.
Goolkaas ayaana ahaa kii guushu ay ku raacday kooxdiisa oo 4-3 ku badisay
The Austrian league ayaa u arkay in ficilka Tekpetey uu soo bandhigay uu horkeedi karay qas, wax khalad ahna kuma aysan arag go'aanka uu garsooruhu ciyaarta kaga saaray ciyaartoyga.
Kooxda Altach ayaa racfaan ka qaadanaysa go'aankaas ka dib markii cay "aan la rumaysan karin ay soo baxday".
Gabadh madaw oo Maraykanka lagu "midab takooray"
Lukaku: "aan ka socono haddalka muranka dhaliyay"
Ururka Kick It Out oo dalbaday in la joojiyo 'faquuqidda' Lukaku
Guddiga anshaxa ee The Austrian league ayaa sheegay in ay laaleen ganaaxii ciyaarta labaad, waxayna ku soo rogeen in uusan muddo lix bilood ah ciyaarin, ka dib markii ay fiiriyeen baaxadda carada ka dhalan kartay ficilka Tekpetey, oo ammaah ahaan kaga soo maqan kooxda Jermalka ah ee Schalke 04.